Home Family သားသားမီးမီးတွေနဲ့အတူ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ချင်ရင် ဒီလိုတွေအဖြစ်ခံနိုင်ရမယ်နော်။
သားသားမီးမီးတွေနဲ့အတူ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ချင်ရင် ဒီလိုတွေအဖြစ်ခံနိုင်ရမယ်နော်။
သားသားမီးမီးတွေက မိဘတွေအတွက်တော့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရတနာတစ်ပါးပါပဲ။ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ သဲသဲလှုပ်ချစ်ကြတာမို့ သူတို့ရဲ့ သားသားမီးမီးတွေနဲ့အတူ အမှတ်တရတွေ အများကြီးရှိချင်ကြပါတယ်။ ဒ့ါကြောင့်သူတို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသားမီးမီးတွေနဲ့အတူ အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေ အများကြီး ရိုက်ကူးပြီး သိမ်းဆည်းထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူတဲ့နေရာမှာ ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ ပုံတွေလည်းရှိသလို တကယ့်ကို အလွဲကြီး လွဲသွားပြီး ကို့ယို့ကားယားအဖြစ်မျိုးနဲ့လည်း ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအလွဲတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရသလဲဆိုတာတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အောက်က ပုံတွေသာ ကြည့်လိုက်ကြပါတော့နော်။
သားသားမီးမီးေတြက မိဘေတြအတြက္ေတာ့ အဖိုးမျဖတ္နိုင္တဲ့ ရတနာတစ္ပါးပါပဲ။ ငယ္ရြယ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သဲသဲလွုပ္ခ်စ္ၾကတာမို႔ သူတို႔ရဲ့ သားသားမီးမီးေတြနဲ႔အတူ အမွတ္တရေတြ အမ်ားႀကီးရွိခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒ့ါေၾကာင့္သူတို႔ရဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သားသားမီးမီးေတြနဲ႔အတူ အမွတ္တရဓာတ္ပုံေတြ အမ်ားႀကီး ရိုက္ကူးၿပီး သိမ္းဆည္းထားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံေတြရိုက္ကူတဲ့ေနရာမွာ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕နဲ႔ အဆင္ေျပတဲ့ ပုံေတြလည္းရွိသလို တကယ့္ကို အလြဲႀကီး လြဲသြားၿပီး ကို႔ယို႔ကားယားအျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔လည္း ၾကဳံေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအလြဲေတြနဲ႔ ေတြ႕ၾကဳံရသလဲဆိုတာေတာ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ေအာက္က ပုံေတြသာ ၾကည့္လိုက္ၾကပါေတာ့ေနာ္။
၁။ ဒီလို အချိန်ကောင်းကိုစောင့်နေတာ ကြာပြီ။ ၁။ ဒီလို အခ်ိန္ေကာင္းကိုေစာင့္ေနတာ ၾကာၿပီ။
၂။ ရိုက်တုန်းကတော့ cute ပုံလေးပဲ။ ဒါပေမဲ့ funny ဖြစ်သွားတယ်။ ၂။ ရိုက္တုန္းကေတာ့ cute ပုံေလးပဲ။ ဒါေပမဲ့ funny ျဖစ္သြားတယ္။
၃။ Oh! No ဒီလိုတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ၃။ Oh! No ဒီလိုေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။
၄။ မိုးစက်လေးတွေနဲ့ ကဗျာဆန်နေတဲ့ သားဖနှစ်ယောက်။ ၄။ မိုးစက္ေလးေတြနဲ႔ ကဗ်ာဆန္ေနတဲ့ သားဖႏွစ္ေယာက္။
၅။ ဟာ! အငယ်ဆိုပြီး သက်သက်အနိုင်ကျင့်သွားတာ။ ၅။ ဟာ! အငယ္ဆိုၿပီး သက္သက္အနိုင္က်င့္သြားတာ။
၆။ မေမေက ချစ်တော့လဲ မရွံတော့ပါဘူး။ ၆။ ေမေမက ခ်စ္ေတာ့လဲ မရြံေတာ့ပါဘူး။
၇။ သားမိနှစ်ယောက် မျက်နှာပေးက အလန်း။ ၇။ သားမိႏွစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာေပးက အလန္း။
၈။ လောကကြီးက နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာကြီးပါ။ ၈။ ေလာကႀကီးက ေနတတ္ရင္ ေက်နပ္စရာႀကီးပါ။
၉။ အဖေဖြစ်သူကို မျက်နှာသစ်ပေးတဲ့ ကလေး။ ၉။ အေဖျဖစ္သူကို မ်က္ႏွာသစ္ေပးတဲ့ ကေလး။
၁၀။ ခေါင်းပေါ်ရောက်မှ လုပ်ချင်တာ လုပ်ချတော့တာပဲ။ ၁၀။ ေခါင္းေပၚေရာက္မွ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ခ်ေတာ့တာပဲ။
၁၁။ cute family photo လေးရဖို့ ဒီလိုတွေ ရင်းထားရတာနော်။ ၁၁။ cute family photo ေလးရဖို႔ ဒီလိုေတြ ရင္းထားရတာေနာ္။
၁၂။ အော် သားရယ် ကျောကုန်းနဲ့ အိမ်သာခွက် မှားမြန်းနေလာကွာ။ ၁၂။ ေအာ္ သားရယ္ ေက်ာကုန္းနဲ႔ အိမ္သာခြက္ မွားျမန္းေနလာကြာ။
၁၃။ တစ်ခါချီမိရင် အင်္ကျီက တစ်ထည်ပြန်ပြန်လဲနေရတာတော့ မဟုတ်သေးဘူးနော်။ ၁၃။ တစ္ခါခ်ီမိရင္ အကၤ်ီက တစ္ထည္ျပန္ျပန္လဲေနရတာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးေနာ္။
၁၄။ ရွှေပန်းလေးက ထွက်တဲ့ ရေပန်းလေးနဲ့ သားဖနှစ်ယောက်။ ၁၄။ ေရႊပန္းေလးက ထြက္တဲ့ ေရပန္းေလးနဲ႔ သားဖႏွစ္ေယာက္။
၁၅။ ဖေဖေ့ သမီး အညစ်ပတ်တုံးလေး။ ၁၅။ ေဖေဖ့ သမီး အညစ္ပတ္တုံးေလး။
၁၆။ အော် အော် သူကတော့ အေးဆေးပဲ၊ အအိပ်တောင် မပျက်ဘူး။ ၁၆။ ေအာ္ ေအာ္ သူကေတာ့ ေအးေဆးပဲ၊ အအိပ္ေတာင္ မပ်က္ဘူး။
ကမ္ဘာပေါ်က အကြင်နာတရားအပြည့်နဲ့ကူညီတတ်တဲ့ လူအချို့ရဲ့ ကြည်နူးစရာ အပြုအမူလေးတွေ
Previous articleမိုင်ပေါင်း ၂သောင်းဝေးတဲ့ သမီးဆီ သစ်သားကား ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး မွေးနေ့လက်ဆောင်လာပေးတဲ့ အဖေ